Lapho owesifazane ekugqolozele - Izeluleko Zamadoda AseSitayeleni | Amadoda aSitayela
Lapho umuntu wesifazane ekubuka
U-Alicia tomero | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 02/09/2021 21:18 | Izithandani Nezocansi
Ukuxhumana ngamehlo kuyindlela yokuxhumana ekhona phakathi kwabantu, futhi kungaba ukusikisela kokuheha. Uma owesifazane ekugqolozele, uyabona ukuthi kukhona okunye, yize namanje ungazi ukuthi ngabe kukhona yini ngenxa yokwesatshiswa, ukunconywa noma ukumangala.
Ezimweni eziningi kufanele sisebenzise umuzwa wethu wesithupha kepha kufanele sisebenzise ukucabanga kwethu okuhle ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthi lokho kubheka okungaguquki kungasho ukubusa noma usongo. Kodwa-ke, sinamehlo ethu njengesikhali esikhulu sokunika amandla ukuze bonke abantu bakwazi ukuxhumana ngaphandle kokusebenzisa ulimi lokukhuluma, kuyisici esiyinhloko sezimo ezisondelene.
1 Lapho othile ekubuka
2 Bona ukuthi uziphatha kanjani ngenkathi ebambe iso lakhe
3 Kwenzekani uma ugwema ukubuka kwakhe?
Lapho othile ekubuka
Uzizwe impela ukuthi umuntu ukubheka kanjani ngaphandle kokukubona ngamehlo akho. Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini Biology yamanje ukuqinisekisile ukuthi bonke abantu bazimisele ukubikezela lapho othile ebuka thina ngaphandle kokumbheka.
Singahlosile futhi ngokubuka ngeso lenyama, singabona futhi lapho othile ebeka umzimba wakhe ngakithi futhi ephendulela ikhanda lakhe ohlangothini olufanayo. Kulokhu sizizwa futhi lapho umuntu ubambe iso lakhe ebheke ngakithi.
Kwenzekani lapho sizwa ukuthi owesifazane usibhekile? Impela sibheka emuva futhi le nhlangano ingadala ukuthi omunye umuntu aqhubeke nokubuka. Bona ukuthi ubuso bakhe bunjani nokuthi amehlo akhe ahlala isikhathi esingakanani. Uma imizuzwana embalwa egcina amehlo akhe ekubheke futhi ubuso bakhe bubucayi futhi buyimfihlakalo, ngaphandle kokungabaza leyo ntombazane ijabule ngawe futhi iyathandwa nakanjani. Kepha ungalenzi iphutha, kunabesifazane abayimfihlakalo kangangokuba bagcina imfihlo yabo futhi bazama ukukuhlola ngaphambi kokwenza isheke.
Intshisekelo iyingxenye yokubukeka ngokucophelela, kepha njalo akusho ukukhanga ngokocansi. Abantu bangabheka eduze ngoba bazizwa ukuncoma nokufuna ukwazi. Lokho kulabo bethu abazizwa bebhekiwe kungabonakala kucindezela futhi kucasula. Imininingwane yokubuka ingaba yinselele, njengoba benza ukuzifundela okuqhubekayo. Into engokwemvelo kakhulu kungaba ukusuka kuleyo ndawo uma ungakhululekile noma ubekezelela lowo mzuzu ngaphandle kokuwenza ubaluleke kakhulu.
Bona ukuthi uziphatha kanjani ngenkathi ebambe iso lakhe
Abesifazane ababuki muntu, kanjalo nje, kuyinkomba yokuthi kunesasasa elikhulu. Bheka imininingwane yokuziphatha kwabo, kunemininingwane enganakwa njengokubukeka okukhuthazayo nokunaka. Uma leyo ntombazane iza kuwe futhi uziphatha enamahloni futhi enamahloni, nakanjani intshisekelo. Yebo unesithakazelo esimweni sakho somzwelo, unemizwa futhi akawasusi amehlo akhe kuwe, yimininingwane elula ekhombisa ukuthi uyakuthanda.
Uma uku-group chat kukhona nezimpawu zentshisekelo enkulu. Noma ngabe unabangani, ngokuqinisekile uzokubhekisisa, odlala ngothando, uthinta izinwele zakhe njalo futhi izama ukubona ngeso lengqondo uma ubheka emuva.
Impela ngaphakathi kwaleyo ntshisekelo ifuna ukuthintwa ngokomzimba, ikhombisa ubuso obunothando futhi ifuna ukumamatheka. Akagcini nje ngokukhombisa ukuheha kwakhe kuwe ngale mininingwane, kepha futhi uncome. Kepha uma intombazane inamahloni kancane, ingahle ingazivezi lezi zimpawu futhi kuzofanele ubheke ezinye.
Lowo wesifazane ubheka amehlo akhe kuwe, kepha uma usondele kuye futhi ubheke izindebe zakho njalo Kuyinkomba yokuthi ubheke phambili ekukuqabuleni. Umlomo wakho ubonakala uyinkanuko kuye futhi ngokungazi ucabanga ukuthi ukuqabula kwakho kungaba njani.
Uma isikhathi sisondelene kakhulu futhi ulala, bheka ukuthi uya ocansini nini Uma ekugqolozela ngaphandle kokubheka eceleni Kuyisibonakaliso esisobala ukuthi uyathandana. Lapho owesifazane ebambe amehlo akhe isikhathi eside, kuyizimpawu ezisobala zokuthi abantu abazethembayoBaze babe nesimo sokuthembeka.
Kwenzekani uma ugwema ukubuka kwakhe?
Sichaze kabanzi ukuthi umuntu uma ebheka ngokucophelela futhi ebambe amehlo akhe kuyinkomba yokuba ngumuntu kakhulu Qiniseka ngaye futhi ngentshisekelo enkulu ngakuwe. Kodwa-ke, kunabantu abangazethembi kakhulu futhi abenza okuphambene nalokho. Abakwazi ukusiza ukukugqolozela ngokuqhubekayo, kepha ababoni kangako isikhathi eside lapho behlangana nabakho.
Akusilo uphawu lokungabi nentshisekelo, kepha kunalokho bakhangwa futhi bethukileLokho kungavikeleki nokwesaba, esikuchazile, kungukusabela kwalolu hlobo lwabantu. Owesifazane okugwema ukubuka kungenxa yokuthi futhi ifihla okuthile komuntu siqu futhi kungadingeka ukuthi uthole.
Kodwa-ke, kufanele kucatshangwe ukuthi owesifazane ogcina ukubuka njalo kuwuphawu lwentshisekelo, futhi okungaphezu kokuba umuntu ofundile futhi owamukelekayo. Kepha ngakolunye uhlangothi singathola abesifazane abahlushwa yi ukukhathazeka ngokubheka iso Ngale ndlela, amahloni abo ayabanika futhi bazobe begwema lokho kubukeka uma kungenzeka bahlulelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Lapho umuntu wesifazane ekubuka
Izici ezibaluleke kakhulu kumasokisi wamadoda